MUQDISHO, Soomaaliya - Galabta ayaa kulan xiisa badan oo u dhexeeya ciyaartooyda maamulada HirShabeelle iyo Puntland wuxuu ka dhici doonaa garoonka Banaadir Stadium waana midkamid ah kulamada ugu xiisaha badan ee tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Ciyaartooyda Hirshabelle ayaa waxay wataan hal qasaaro oo ay ka soo gudoomeen ciyaartooyda Koonfur Galbeed waxaana ay qarkau saaranyihiin in ay isaga haraan tartanka hadii galabta qasaaro kale ay kala kulmaan ciyaartooyda Puntland.
Xidigaha Puntland ayaa ciyaari doona kulankii ugu horeeyay ee horinta B sidoo kale waa kulankii ugu horeeyay oo ay ka ciyaarayaan guud ahaan tartanka oo ay qaadeen sanadii la soo dhaafay.
Horinta B oo ay kuwada jiraan dhinacyada galabta is arkaya ee Hirshabelle iyo Puntland ayaa waxaa hogaanka u haya ciyaartooyda maamulka Koonfur Galbeed oo guushoodii ugu horeeyay ka gaaray ciyaartooyda Hirshabelle.
Hadii galabta qasaaro ay la kulmaan ciyaartooyda Hirshabelle waxaa soo idlaan doonta rajada ay ka qabeen koobka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir laakiin tababare Cabdi (Kuus) oo hogaaminaya ciyaartooyda Hirshabelle ayaa sheegay in kulankan ay aad ugu diyaarsanyihiin xidigihiisa.
Ciyaartooyda marti-galiyayaasha ee gobolka Banaadir ayaa noqday kooxdii ugu horeysay ee iska xaadirisa wareega 4 dhamaadka tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kadib markii ay awood ku soo qanciyeen dhamaan maamulada horinta A kula mideysan ee Galmudug iyo Jubbaland.
Xiriirka Soomaaliya oo ku dhawaaqay waqtiga la ciyaari doono koobka Super Cup-ka...
Waare oo Go'aan Culus ka qaatay Madaxda Maamul Goboleedyada [Akhriso]
Soomaliya 13.10.2018. 12:11